Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2017 October 30
Tantara tamin'ny 30 Oktobra 2017
Iran: Fanangonan-tsonia ho an'ireo Gadra Politika & Fianjeran'ny Fiaramanidina!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Oktobra 2017
Bilaogera Iraniana maromaro no nanasonia fanangonan-tsonia iray (taratasy) izay nangatahan'izy ireo ny famotsorana ireo gadra politika ao amin'ny fonjan'i Karaj Rejai Shahr. Nangatahana mba handefa solontena any amin'io fonja io ny Amnesty international, Red Cross sy ny fikambanana hafa mpanao asa soa. Toy izao no vakin'ny fangatahana:
Tsy Manambola Hianarana Ao Shily
Amerika Latina30 Oktobra 2017
Tamin'ity herinandro ity, noho ny fahadisoan'ny fandaminana ny angon-tahiry, nomena ho an'ireo mpanankarena nisoratra anarana ny fampindramam-bola avy amin'ny governemanta ary koa ny fanampiana ara-bola ho an'ny fianaran'ireo mpianatra kely fidiram-bola.
Karaiba30 Oktobra 2017
Maninona No Betsaka Miaraka Maty Ireo Lalomena Ao Namibia?
Afrika Mainty30 Oktobra 2017
"An-jatony ireo lalomena hita maty tao amin'ny renirano iray ao anatin'ny valan-javaboaharim-pirenen'i Namibia. Mety ho ny aretin'ny arina no niteraka ity faharinganana ity"